ikhwalithi yekhwalithi ephezulu yesitayela China Manufacturer
Incazelo:Ikhofi Yobuso,Umenzi wekhofi ngokwezifiso,I-Ape Coffee Printer
Home > Imikhiqizo > Iphrinta yokudla > I-Macaron Printer > ikhwalithi yekhwalithi ephezulu yesitayela
ikhofi ebusweni ihambisana nekhekhe, isinkwa, ibhisikidi, ama-macaroni ... izinhlobo zokudla. Ngaphandle kwalokho, futhi kungasebenza ngendwangu, igobolondo lefoni, ikhadi le-PVC, i-DVD, ibhodlela, isikhumba, insimbi, ipeni nokunye. Izindleko ezilahlekile futhi zisebenza kahle.
Iphrinta yomhlabathi ikhofi isetshenziselwa ukuphrinta izithombe ekudleni.Inezinhlobonhlobo ezingu-6 ezingaprinta izithombe ezimibalabala nezikhanyayo.Umphumela wokuphrinta ucacile.Umshini ungashintsha umsebenzi wezincwadi. umenzi wekhofi wendabuko
Umshini womshini wekhofi wuhlobo olusha lwephrinta ye-inkjet eqondile yokushicilela okunamandla, isebenza njengeprinta yezinkinobho zendabuko, yenza ukuphrinta ngokunyathelisa ngokuqondile kwe-inkjet, kodwa ngenxa yokuphakamisa i-flatbed, iphinde iphrinta cishe kuzo zonke izinhlobo zezinto ngaphandle kwamaphepha , njengamaqebelengwane, izinkuni, izinsimbi, iplastiki, isikhumba, nezinye izingubo, indwangu, njll.
Isingeniso sekhofi yephrinta yezithombe ikhofi 2017I-printer ikhofi yekhamera yekhamera inezici eziningi ezinamandla. Kungaphrinta ubuso bomakhasimende noma amagama abafuna ukuwaveza phezu kwekhofi / isinkwa / amabhisikidi. Ukushicilela imininingwane ebusweni kumshini wokunyathelisa uswidi kuyindlela emisha yokwenza ubuciko be-latte, kusho ukuthi akudingeki usebenzise isikhathi esiningi sokufunda nokusebenzisa ubuciko be-latte, udinga ukuthatha isithombe bese iphrinta qedela konke
I-factory Sale Sale Ngokuqondile I-Printer Ikhekhe le-Chocolate Candy Cookie I-Edible Ink Inkinobho yokushicilela umshini wokushicilela ikhofi
Umshini womshini we-caffe-semi-Automatic
Ikhofi Yobuso Umenzi wekhofi ngokwezifiso I-Ape Coffee Printer Ikhofi Okudliwayo Inkinobho Ikhofi nomshini we-Latte Umshini Wekhofi Ilogo Amakhati T Custom I-Selfie Ikhofi e-Pune